လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: What is Barcamp ?
What is Barcamp ?
Barcamp ဆိုတာကိုမကြံုဘူးသေးတဲ့မိတ်ဆွေများကို Barcamp ဆိုတာလေးနဲ့မိတ်ဆတ်ပေးပါရစေ။ Barcamp ဆိုတာကတော့ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် သမားရိုးကျ ပွဲကျင်းပပုံလေးတွေကနေ ခွဲထွက်သွားပါတယ်။ ၀ါသနာတူရာ၊ ရည်မှန်းချက်တူရာလူတွေစုပြီး အတွေ့အကြံုတွေ အသိပညာတွေဖလှယ်ကြမယ့်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
Barcamp ဆိုတာက ဟောပြောပွဲသတ်သတ်မဟုတ်သလို၊ နည်းပညာများကို သရုပ်ဖော်ပြသခြင်း သက်သက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ခေါင်းစဉ်ကြီးတွေတပ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကြီးမျိုးလည်း မဟုတ်၊ Conference လိုမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်၊ Un-conference လို့ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။Barcamp မှာ Experts တွေက Non-Experts တွေကို ဆရာလုပ် သင်ကြားပေးတဲ့ပုံမျိုးနဲ့မသွား ပါဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေ၊ သူများကို အသိပညာ ဝေမျှနိုင်မယ့်အပိုင်းတွေ ကိုယ်စီရှိကြတယ်လို့ Barcamp ကယူဆပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နည်းပညာ၊ အသိပညာ ဖြန့်ဝေတဲ့ ပုံစံဟာ၊ သမားရိုးကျ သင်ကြားပေးပုံကို လုံးဝပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်ပြီး၊ ပိုပြီး interactive ဖြစ်တဲ့ ဆွေးနွေးဖလှယ်မှု ပုံစံမျိုးနဲ့ သွားမယ့် Event ဖြစ်ပါတယ်။
Barcamp မှာ စည်းကမ်းကလနား တွေ၊ agenda များမရှိပဲ အချင်းချင်း တူညီစွာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာ၊ မိမိ ပြောပြ ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ များကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးဖလှယ်ကြပြီး၊ ပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့ ခေါင်းစဉ်ရဲ့ ဦးတည်ရာကို အလိုက်သင့် လိုက်ပါ ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Barcamp ရဲ့ အနှစ်သာရ၊ အသက်ဝင်မှုကတော့ မိမိကိုယ်တိုင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆွေးနွေး (participating) ခြင်းပါပဲ။ Barcamp ကို နားထောင်ရုံသက်သက် လာမှာထက်၊ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာအတွက် မေးခွန်းတွေ၊ ကိုယ်သိထားတာတွေကို ရှင်းပြ၊ ပြောပြဖို့ ပြင်ဆင်မှုတွေ နဲ့တက်ရောက်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
ကိုယ်မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းက သူများတွေ မစဉ်းစားမိသေးတဲ့ ပြသနာကြီးတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်နိုင်သလို၊ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ နည်းလမ်းလေး တစ်ခုဟာ၊ တစ်ခြား တစ်ယောက်အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိတာမျိုးဖြစ်နေနိုင်တာမို့၊ Barcamp သမားတွေ ကိုယ်သိတာတွေကို ပေးရင်းနဲ့ ကိုယ်မသိတာတွေလည်း ယူသွားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
When (2010 January 23-24)
Where Myanmar Info-tech (Yangon, Myanmar)
Sponsors စိတ်ပါ၀င်စားရာ မည်သည့် IT Company, other Company အဖွဲ့အစည်း မဆိုပါ၀င် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
10-12-2009 (Thursday) 10:00 am to 11:30 am
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Wednesday, December 09, 2009
မကြားဖူးသေးဘူး... မျှဝေတာ ကျေးဇူး...
December 9, 2009 at 11:13:00 PM GMT+6:30
December 10, 2009 at 7:54:00 AM GMT+6:30
အဓိပ္ပါယ်ကို စာတွေ့သဘောပါ ထည့်ရေးပေးတဲ့အတွက် ပိုတိတိကျကျသိလိုက်ရတယ်။ ကျေးဇူး သူငယ်ချင်း
December 12, 2009 at 3:43:00 PM GMT+6:30